Doorashada u xisbiga barwaaqo ee dds kaligii ku tartamayo – ዜና ከምንጩ
Doorashadi guud ee dalka ee wareega 6aad ee u soo qabanqaabiyay xafiiska gudiga doorashooyinka ee qaran waxa ay dhacday 14kii bishii sane ee sanadkii 2013kii. Meelihi doorashadu aanay ka dhicin ee sababo la xidhiidha daganaansho la’anta darted ayaa waxa balan loo qabtay in ay wareega labaad doorashadu ka dhacdo 20ka bisha meskerem ee2014ka.
Doorashada doorki kowaad ee dalka ka dhacday deeegaanadi aanay doorashadu ka dhicin guud ahaanba waxa ka mid ah ddsda.madax waynaha ku xigeenka ddsda mudane Maxamad Rooble ayaa wargayska addis maleda u waramay waxaana u sheegay in cod bixiyayaasha deeganku ay is diiwaan galinti dhameeyeen oo xilgan xaadirka ah doorashada dhici doonta u ka qayb qaadan doono kaliya xisbiga barwaaqo.
Doorashada dalka ee wareega 6aad oo soo martay marxalado kal duwan ee bishi sane ka dhacday dalka waxa jiraay deegaano aanay kaba dhicin doorashadu iyo deegaano ay qayb ka mid ah ay ka dhacday, hadaba deegaanadaasi aany gabi ahaanba doorashadu ka dhicin waxa ka midka ahaa deegaanka soomalida, tigraay iyo harari, deegaanada ay qayb ka mid ah ka dhacday doorashaduna waxa ka mid ahaa deegaanka amxaarada, oromiya, beenishaangul gumz iyo deegaanka shucubta qoomiyadaha koonfurta. Waxaana xusid mudan in deegaanka beenishaangul gumz u ahaa deegaanka ay sadix zoon ka dhacday doorashadu ee deegaanada qaybo ka mid ah doorashadu ka dhacday.
Deegaanka beenishaangul labadi zoon ee aanay doorashadu ka dhicin waxa ay kala ahaayeen matakal iyo kaamashi, waxaana xusidmudan in xafiiska gudiga doorashooyinku ee qaran u yidhi labadaasi zoon doorasho kama qaban karo xaaladaha amini darada ah ee halkaasi ka jira awgeed. Waxa kale oo xusid mudan in xafiiska doorashooyinku u sheegay in deegaanada aanay qayb ka mid ah doorashadu ka dhicin ay doorashadu uga qabsoomi wayday sababo la xidhiidha nabadgalyo la’anta iyo waraaqihi codadka lagu dhiibanayay dabacaadooda oo ay dhib kala kulmeen.
Waxa u gudiga xafiiska doorashooyinku u sheegay doorashada ka dhici doonta meskerem 20keeda 2014 deegaanada harari, soomalida iyo deegaanak qoomiyadaha iyo shucuubta koonfureed ka qayb qaadan doona cod bixinta ee is diiwan galiyay ay tiradoodu tahay 7.6 milyoon oo qof, diridhabe waxa is diiwan galiyay 1841, harari waxa iska diiwan galiyay 135 kun, soomalida waxa iska diiwaan galiyay 5.1 milyoon oo qof halka deegaanka konfurta ee qoomiyadaha iyo sucuubtana iska diiwaan galiyeen 2.3 milyoon oo qof. Waxa kale oo u xafiiska gudigu u sheegay in deegaanka qoomiyadaha iyo shucuubta ee koonfurta deegaanka ka goa’ayna ay 527 kun oo qof ay ka qayb qaadan doonan.
Hadaba waxa la sheegay in deegaanadan ay doorashadu ka dhici doonto la dooran doona musharaxiin 47 musharax ah oo loo dooranayo goolaha wakiilada shacbiga iyo105 musharax oo loo dooran doono goolaha shacbiga ee deegaanada. Guud ahaanna waxa waxa ay doorashadu ka dhici doonta 7054 kun oo goob doorasho.
Goolaha doorashooyinku maadama u yidhi doorashada wareega lixaad mar kaliyaata ma qaban karo waxa loo kala qaybiyay labo door. Hadaba doorka labaad edoorasho waxa u gudiga doorashadu ku jira u diyaar garawgeedi. Xafiiska gudiga doorashooyinka oo doorashada doorki kowaad qabtay bishi sane 14keedi 2013kii ayaa waxa u doorka labaad ugu talo galsanaa in ay doorashadu dhacdo 1da bishii pagume ee 2013kii, waxa gudigu hadana u sheegay in u diyaar garawgii doorashada oo aan la dhamays tiring awgeed loo badalay in la qabto 20ka bisha meskerem ee 2014ka.
Waxa la sheegay in doorashada doorka labaad ee ka dhici doonta ddsda in markii hor ay jireen xisbiyo kala duwan oo rabay in ay ku loolamaan doorashada, kuwaasi oo kala ahaa xisbiga barwaaqo, xisbiga xoriyada iyo midnimada, xisbiga jabhada wadaniga xoraaynta ogaadeeniya (jwxo) iyo xisbiga ururka muwaadiniinta itoobiya(ezeema). Sadex xisbi oo xisbiyadaasi aan kor ku soo sheegnay ah ayaa ka baxay loolankii doorashadaasi waxaana ku soo hadhay oo kaliya xisbiga barwaaqo.sababta ay xisbiyadaasi uga baxeen loolankaasi doorashada ee ddsda ayaa waxa ay ku sheegen in ay jireen dhibaatooyin la xidhiidha is diiwaan galinta cod bixiyayaasha oo cabashooyinki ay u soo gudbiyeen xafiiska gudiga doorashooyinka oo wax jawaab ah laga waayey xafiiskaasi.
Wargayska addis maleda ayaa xisbiyadaasi aan ka qayb qaadanayn doorashada ddsda isku dayay in u ku waraaysto,waxaana u la kulmay madax xidhiidhka dad waynaha ee xisbiga ezeema.
Waxa u yidhi waxa la ogsonyahay in doorashada wareega 6aad ee dalka ay ka qayb qaataan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo ay six or ah uga dhaqdhaqaaqan deegaanka ayada oo aanay soo gaadhin wax hanjabaad ah oo ay xaqna u leeyihiin, hadana waxa deegaankaasi ka jiray arin sidaasi ka duwan oo hal xisbi kaliya loo eexanayo.
Sida ay fikirkooda sida wada jirka ah ee ay ku sheegeen xisbiyada ezeema iyo xoriyad iyo midnimada ayaa ah xisbiga talada haystana ku daro xisbiya kasta oo siyaasadeed oo raba in ay ku loolamaan doorashada heshiiski ay wada saxeexen ee hab dhaqanka doorashada bayaanki laga soo saray ayaga oo ka duulaya in ay ku xaqiijiyeen hab socodka doorashada ay ugu dhaqmaan sidii ku haboonayd sharciga doorashada loogu talo galay.
Hase ahaate waxa ay sheegen in aanay jirin hawlo loo qabtay xisbiyada siyaasadeed ee ku loolamaya doorashada in fikradahooda kala duwan ay si shrciyaysna ugu olaleeyaan iyo hawsha in cod bixiyayaashu ay uga qayb qaatan sidi fikradahooda ay six or ah uga dhiibtaan.
Waxa kale oo ay sheegeen xisbiyada ezeema iyo xoriyada iyo midnimadu in deegaanka soomalida dhibaatada ka jirta ee geedi socodka is diiwaan galinta cod bixiyayaasha ka sakoow ay ku xad gudbeen hab socodkii doorashada, oo aan macno lahayn oo ka kabaxsan sharciga oo ay hal xisbi ugu eexdeen.
Waxa kale oo ay sheegan in xisbiyada siyaasadeed ee kula loolamayay doorashada xisbiga talada haysta in cabashooyinki ay hada ka hor u soo jeediyeen xafiiska gudiga doorashooyinka xal loo heli waayay ay kalsooni dari ku abuurtay sidii ay doorashada uga qayb gali lahaayeen.
Labadaasi xisbi ee aan korka ku soo sheegnay ayaa yidhi in warbixintoodi ay hada ka hor shaaciyeen ay ku xuseen agabyadii doorashada ee hada ka hor la xaday in dib loo soo celiyo, sidaas darteedna kaadhadhkii cod bixiyayaasha ee hada ka hor la xaday oo aan dib loo soo celinin waxa ay doorashada ku keenaysa kalsooni daro.
Waxa kale oo xisbiyadu ay sheegeen in meelaha aan laga samayniin goobaha doorashada ay ka codsadeen xafiiska gudiga doorashooyinka in laga sameeyo goob doorashooin, balse jawaabti u xafiisku ugu jawaabay aanay ahayn mid ay ku qancaan.
Sida ay sheegeen xisbiyada ka baxay ka qayb galkii doorashada ee deegaankaasi ayaa ku sheegen hadalkooda in xafiiska gudigu aanu ku dhaqmin dariiqadi looga baahna balse u ku dhaqmay qaab dhismeedkii dawlada, sida oo kale in hawl fuliyayaashi xaday agabyadii doorashooyinkana la hor keeni waayo sharciga ayaa ka dhigaysa doorashada mid aan cadaaladi ka jiri oo aan kalsooni lahayn.
Waxa kale oo ay xuseen in aan xog cad laga helin geedi socodkii qaybinta agabka doorashooyinka ee gudigu soo ban dhigay, xulashadi lagu xulanayay hawl fuliyayaasha iyo tababaradii, sida oo kale xogti ku saabsanayd geedi socodkii diwaan galinta cod bixiyayaasha oo aan xili goan loo samaynin.
Madaama aanay hawlishi ku saabsanayd qaybinta agabyada doorashooyinka iyo dhookmantiyada loo qaaybinayay dagmooyinka iyo qabaleeyada ay shaqaalaha dawladu ku qaybiyeen ayaga oo ku dhaqmaya qaab dhismeedki dawlada oo aanay ka war haynin shaqaalihi xafiiska gudigu ee loo tababaray hawlaha doorashada ayaa waxa ay baxeen loolanki doorasho ee ay ka qayb gali lahaayeen 20ka bisha meskerem ee 2014ka.
Madaxa is gaadhsiinta ee xafiiska gudiga doorashooyinka marwo Sooliyana Shimalis ayaa sheegtay in agabkii doorashooyinka ee la qaybinayay laga raray bakhaarka ku meel gaadhka ah ee gudigu ku leeyahay magaalada addis ababa oo gawaadhidi lagu raray ay ka baxeen addis ababa 11kii bishii maskerem ee 2014kii oo ay u baxeen goob doorashooyinki ay u wadeen agabyadaasi.
Xafiiska gudiga doorashooyinku waxa u sida oo kale u sheegay in meelihi ay dhibaatadu ka jirtay ee diwaan galinta cod bixiyayaashu wax yaabihi ka xumaaday ay ku bixiyeen shan milyoon oo bir oo ay halkaaasi u direen xirfadlayaal la tababaray si ay dib u habayn ugu sameeyan oo dib diwaan galinta loogu bilaabo, arintaasina ay ogaysiiyeen xisbiyada siyaasadeed.
Waxa la sheegay in diwaan galinta cod bixiyayaasha mar kale lagu celiyo ay xisbiyada siyaasadeed codsadeen. Waxana la qabtay hawsha in tababaro la siiyo hawl fuliyayaasha oo kor loo qaado fahan yarida ka jiray dhinaca hawl fuliyayaasha si loo hagaajiyo iyo in lagu caawiyo agabyada oo dib loogu celiyo diwaan galinta cod bixiyayaasha.
Waxa ay xisbiyada siyaasadeed codsadeen in deegaan dhan dib loogu celiyo geedi socodka diwwan galinta ee cod bixiyayaasha, balse khayraadka oo yaraaday awgeed waa la awoodi waayay in sidaasi la sameeyo.
Xafiiska gudiga doorashooyinka ayaa ku sheeay in xisbiyadu ay ka baxaan ka qaayb galkii doorashada xili ay uga hadhsantahay laba todobaad oo kaliya ficil ay ka muuqato qayr masuulnimo. Waxa ay noogu jawaabeen bu yidhi xafiiska gudigu in ay naga codsadeen in la siiyo hawl fuliyayaal doorashada ah oo ay ka dhax wayeen hawl filiyayaal ay labada dhinacba ka raali yihiin.
Doorashada maalmo kadib ka dhici doonta sadex deegaan iyo ismaamulka magaalada diridhaba ayaa waxa ku loolamaya 22 xisbiyo siyasadeed, balse deegaanka soomalida waxa doorashada ka dhici doonta waxa ka baxay sadex xisbi oo aan doorashada ka qayb galayn.
Kuwaasi oo u ka mid yahay xisbiga jabhada wadaniga ah ee xoraaynta ogaadeeniya (jwxo) ayaa sheegay in aanu doorashada uga qayb gali doonin sababo kala duwan.waxa kale oo u sheegay xisbigu in xafiiska gudiga ee doorashooyinka qaran ay ka jiraan khaladaadyo dhinaca hawshooda ah, oo ay ka codsadeen in ay hagaajiyaan khaladaadyadasi balse aanay wax is badal ah aanay ku samaynin.
Waxa ay Sooliyana Shimelis sheegtay in doorashada dhici doona 20ka meskerem ay kuraasta baarlamaanka kaalinta ugu badan ku leeyihiin deegaanada soomalida iyo koonfurtu, sidaas darted kuraasta ay goolaha wakiilada shacbigu u leeyahay ee 547da ah waxa doorashadi bishi sane laga doortay 436 kuraas oo kaliya. Deegaanka aan xiligaasi guud ahaan doorashadu ka dhicin ee soomaalida waxa u barlamaanka ku leeyahay 23 kursi, sidaas darted 20ka bisha meskerem waxa doorashada lagu samaynayaa 23ka kursiba. 23ka kursi ee baarlamaanak waxa dheer bay tidhi in 273 kuraas oo goolaha deegaanka ah lagu dooran doono.
Doorashada 20ka bisha meskarem waxa kale oo doorashada kuraasta barlamaanka lagu samayn doona deegaanka koonfurta.104ta kursi ee uu ku leeyahay goolaha wakilada shacbiga ee deegaanka koonfuta waxa lagu doortay 22 kursi. Sida oo kale deegaanka hararida oo muranki maxkamada ka jiray awgeed aanay doorashadu ka dhicin 14kii sane, ayaa waxa la dooran doona kuraasta ka jira labada goole ee deegaankaasiba 20ka bisha meskarem.
Doorashadii guud ee dalka ka dhacday natijadeedi ayaa waxa u gudiga doorashooyinka ee dalku shaaciyay xiligii ay doorashadu dhacday kadib shan iyo toban cisho, bishii aan ka soo gudubnay ee hamle 3/2013kii. Natiijada doorashada ee u gudigu shaaciyay ayaa kuraasti u guud ahaan goolaha wakiilada shacabka itoobiya ee ahaa 547da ayaa waxa doorashadii doorki kawaad doorashada laga qayb galiyay 465 kursi oo u leeyahay goolaha wakiilada shacabku. Waxaana ay ka dhigantahay in doorki kawaad ee doorashada ay ka soo hadheen 82 kursi oo u leeyahay goolaha wakiilada shacabku. Waxa xusid mudan in u gudiga doorashooyinku marki u shaaciyay natiijadi ugu horaysay u ku sheegay in 436dii kursi ee barlamaanka u helay xisbiga talada haysta 410 kursi, sida oo kale natijadii u xiligaasi shaaciyay gudigu waxa u ku sheegay in 26 kursi oo goolaha wakiilada shacbigu u leeyahay ay ku guulaysteen doorki kawaad ee doorashada xisbiyadi doorashada kula loolamayay xisbiga talada haysta iyo qaar iskood u loolamayay.
Total views : 6692978